Juunyo 19, 2019 8:43 b 0
Radio Daljir oo xoogga saaraya, siina xoojin doona soo gudbinta wararka iyo waraysiyada iftiimaya xaaladihii ugu danbeeyey ee Dowlad Deegaanka Soomaalida, waxa uu asbuuc walba idiin soo gudbin doonaa warar joogta ah oo ka warrama xaaladihii ugu danbeeyey ee deegaanka, dhan siyaasad iyo dhan dhacdooyinkii ugu danbeeyey ee deegaanka.
Shil gaari ayaa ka dhacay duleedka magalaada Wardheer ee xarunta gobolka Doollo. Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhawaacmay shilkaas, sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. Shilka ayaa yimid kaddib markii laba Gaari oo ka kala yimid degmada Danood iyo degmada Daratoole isku dheceen duleedka magalaada Wardheer
Dagaal beeleed ayaa ka dhacay tuulada Saliida ee gobolka Erer. Dagaalka ayaa waxaa la sheegay in uu dhexeeyay labo maleeshiyo beeleed oo wada dega deegaanka.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalka ku dhintay hal Qof, halka ay ku dhaawacmeen siddeed kale. Mas’uuliyiinta gobolka Erer ayaan weli ka hadlin dhacdadaan.
Maleeyshiyaadka Oromada ayaa weerar la beegsaday tuulada Daraami oo hoostimaada degmada Tulliguuleed ee gobolka Fafaan. Maleeyshiyaadkaas Oromada oo u soo gudbay xaduudka gobolka Soomaalida waxa ay hakaas ku dileen hal qof, saddex kalena waa ay dhaawaceen. Qofka la dilay ayaa magaciisu lagu sheegay Muuse Aw-Aadan.
Ciidamada Liyuu Booliska ayaa dil ka geystay gobolka Qorraxey ayaga oo shalay dilay nin magaciisa lagu sheegay Daahir Shiikh Ibrahim, waxa ayna dhaawaceen saddex wiil oo dhalinyaro ah. Ninka la dilay ayaa ahaa qurbojoog ka yimid Norway, ahaana ganacsade deegaanka laga yaqaan.
Daahir Shiikh Ibraahim waxaa lagu dilay tuulada Baraajisaale oo hoostimaada degmada Kudunbuur ee gobolka Qorraxey. Tuulada Baraajisaale ayaa in muddo ah waxaa ka jiray iskudhacyo u dhaxeeyo laba beelood oo wada dega deegaanka.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 129 Wararka 18279